အမျိုးသားများအတွက်များအတွက်လူမျိုးစု Tattoos - Tattoos အနုပညာအကြံပြုချက်များ
sonitattoo ဧပြီလ 9, 2017
1. လူမျိုးစုတက်တူး လက်ဝဲလက်မောင်းအပေါ်တစ်ဦးလူသည်သြဂုတ်လကြည့်ကြပါစေ
2 ။ လူမျိုးစု ခြေပေါ်တက်တူး လူသည်သြဂုတ်လကြည့်ကြပါစေ
3 ။ အနက်ရောင်မှင်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူလူမျိုးစုတက်တူးထိုးနေတဲ့လူကို classy ကြည့်ရှုစေသည်
classy အလိုတော်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကြည့်ချင်သူကိုယောက်ျား ရင်ဘတ်ပေါ်မှာအနက်ရောင်မှင်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူလူမျိုးစုတက်တူး နှင့်ပခုံး
4 ။ နောက်ကျောအပေါ်လူမျိုးစုတက်တူးထိုးယောက်ျားအတွက် moralistic ကြည့်တတ်၏
5 ။ အနက်ရောင်နှင့်အညိုရောင်ဒီဇိုင်းကိုမှင်နှင့်အတူလူမျိုးစုတက်တူးထိုးနေတဲ့လူကိုဆွဲဆောင်မှုကိုကြည့်စေသည်
6 ။ အနက်ရောင်မှင်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူလူမျိုးစုတက်တူးထိုးနေတဲ့လူကိုမရနိုင်ပါဘူးကြည့်ရှုစေသည်
7 ။ အနက်ရောင်မှင်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူလူမျိုးစုတက်တူးထိုးနေတဲ့လူကိုစတိုင်ကိုကြည့်စေသည်
ယောက်ျားတစ်ဦးအနက်ရောင်မှင်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူလူမျိုးစုတက်တူးချစ်ကြလော့ ဒီတက်တူးထိုးသူတို့ကို Gallant နှင့်ချွန်ထက်ကိုကြည့်ပါစေ
8 ။ လက်ဝဲပခုံးပေါ်မှာလူမျိုးစုတက်တူးထိုးယောက်ျားခံ့ညားပေါ်လာစေသည်
9. လက်ရုံးအပေါ်လူမျိုးစုတက်တူး ယောက်ျား ostentatious ကြည့်ပေးသည်
ဒါကြောင့်သူတို့ကို ostentatious ကြည့်ပေးသည်ကတည်းကလူတို့သညျအနိမ့်ပြန်လက်မောင်းပေါ်လူမျိုးစုတက်တူးထိုးကိုချစ်
10 ။ ပခုံးပေါ်လူမျိုးစုတက်တူးထိုးနေတဲ့ကောင်လေးလက်ရာမြောက်သောကြည့်ရှုစေသည်
11 ။ ခြင်္သေ့သည်လူမျိုးစုတက်တူး ပခုံးပေါ်သတ္တဝါတွေဟာ foxy ကြည့်လုပ်
12 ။ လက်တော်အပေါ်လူမျိုးစုတက်တူးထိုးနေတဲ့လူကိုစတိုင်ကိုကြည့်စေသည်
ဘရောင်းယောက်ျားကသူတို့လက်ပေါ်မှာအနက်ရောင်မှင်ဒီဇိုင်းလူမျိုးစုတက်တူးထိုးဘို့အသွားလိမ့်မည် ဒီတက်တူးဒီဇိုင်းကိုသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောနှင့် classy ကြည့်ရောက်စေဖို့ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားကိုအရောင်နှင့်လိုက်ဖက်
13 ။ လက်ဝဲလက်ပေါ်လူမျိုးစုတက်တူးထိုးနေတဲ့လူတဦးဖန်စီကြည့်ကြပါစေ
လက်မောင်းတက်တူးလိပ်ပြာတက်တူးပန်းပွင့်တက်တူးချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးပန်းချီတက်တူးrip တက်တူးချယ်ရီပွင့်တက်တူးဆင်တက်တူးစိန်တက်တူးနှလုံး Tattoosရွှေလင်းတတက်တူးလက်တက်တူးဂီတတက်တူးFeather Tattooရင်ဘတ်တက်တူးအစ်မတက်တူးပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးခြင်္သေ့သည်တက်တူးအသင်္ချေတက်တူးလည်ပင်းတက်တူးကြောင်တက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးစုံတွဲတက်တူးလက်တက်တူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးဂျီဩမေတြီ Tattoosလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးခြေလျင်တက်တူးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူးတက်တူးထကျောက်ဆူးတက်တူးရေဘဝဲတက်တူးနေရောင်တက်တူးလတက်တူးမြှားတက်တူးသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးmehndi ဒီဇိုင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးမျက်စိတက်တူးKoi ငါးတက်တူးရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးလူမျိုးစုတက်တူးငှက်တက်တူးနောက်ကျောတက်တူးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူးချစ်စရာတက်တူးကငျးမွီးကောတက်တူးဟင်္တက်တူးခြေကျင်း Tattoos